Vaovao - miaro ny ankohonanao ny palitao mandrehitra anti-virus
Miaro ny ankohonanao ny palitao mandrehitra anti-virus
Palitao antimicrobial sy antiviral light: ny virus dia zavamananaina kely sy tsotra izay tsy misy afa-tsy karazana asidra nukleika (ADN na RNA) izay tsy maintsy miaina ao anaty sela misarona ary mihamaro amin'ny famerimberenana. Na dia kely aza ny viriosy dia kely sy kely ny habeny, izy ireo afaka mamparary ny olona sy ny zavamaniry ary mamono azy ireo. Anisan'ireo viriosy bitika ADN kely, ohatra, ny sasany dia miteraka gastroenteritis indray amin'ny olombelona sy ny kisoa, ny sasany kosa mihinana ny famantaranandron'olombelona ary tsy mahay mamorona otrikaretina izy ireo, fa noho ny fanampian'ny adenovirus, viriosy mpanampy iray hafa izay miditra amin'ny taonina.
Ny viriosy misy fiatraikany amin'ny olombelona indrindra dia ny gripa! Ny gripa dia mamono olona mihoatra ny 88000 isan-taona any Shina, mihoatra ny 80 isanjaton'ny olona efa 60 taona mahery. Ny valanaretina Fluenza dia mifindra amin'ny alàlan'ny vongan-drivotra, ny fifandraisana amin'ny olona mora tohina sy ny olona voan'ny areti-mifindra, na ny fifandraisan'ny zavatra maloto. Ny vanim-potoana ririnina ankapobeny dia vanim-potoana misy tranga lehibe, ateraky ny viriosy gripa gripa virus sy gripa gripa B. Ny mpamorona dia te hilaza aminao fa ny tanjona voalohany amin'ny vokatra dia ny hiarovana ny fahasalaman'ny tenany sy ny fianakaviany.
Ny lamba fanoherana ny bakteria dia efa matotra tokoa eny an-tsena, ary milamina ihany ny fanandramana sy ny fanandramana fanoherana ny viriosy. Niato tsikelikely ny valan'aretina anatiny, fa amin'ny eritreritra faharoa, io vokatra io dia misy fiatraikany ihany koa amin'ny virus gripa mahazatra, ka nalefa ho an'ny rehetra, ny vokatra dia andian-ray aman-dreny, fomba tsotra, antenaiko fa izao tontolo izao dia afaka miaina am-pilaminana ary afaka amin'ny aretina sy ny loza.
Ity palitao maivana maivana ity dia mety amin'ny sokajin-taona maro, ary azon'ny ankizy sy ny olon-dehibe anaovana. Izy io dia azo anaovana toy ny akanjo ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny mpivady mba hahatonga ny fianakavianao ho mafana sy akaiky kokoa, na ho an'ny dia lavitra, na fianakaviana, na ho an'ny fanatrehana tsy tapaka, ny palitao dia manome mora foana tsy voafetra